Ciidamada Dowlada iyo kuwa Amisom oo Howlgal Qorsheysan ka Fuliyay Deegaanka… – Kismaayo24 News Agency
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Amisom oo Howlgal Qorsheysan ka Fuliyay Deegaanka…
by Tifaftiraha K24 17th July 2016 058
Ciidanka dowlada federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyey deegaanka Baladul Amiin ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaas oo xarun muhiim ah u aheyd Al-shabaab.
Ciidamada iskaashanaya ayaa howlgalkooda si gaar ah uga fuliyey ilaa iyo afar xarun oo Al-shabaab rug u aheyd, kuwaas oo ay kamid ahaayeen xarun ay ku sheegeen saldhig boolis oo ay dadka lacago sharci daro ah uga qaadi jireen iyo sidoo kale xarunta maamulka u aheyd Al-shabaab ee deegaanka Baladul Amiin ee gobolka Sh/Hoose.
AMISOM iyo ciidanka dowlada ayaa howlgalkaasi ku qab qabtay ilaa iyo toban ruux oo looga shakiyey in ay katirsan yihiin Al-shabaab, sida AMISOM ay sheegtay, waxaana howlgalkaasi uu qabsoomay iyadoo aaney jirin wax iska hor imaad ah oo Al-shabaab ay la galeen ciidamada iskaashanayey.
Saraakiisha ciidanka dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa kulan la qaatay odayaasha deegaanka iyo qeybaha bulshada, iyadoo sidoo kale ciidanku dadka deegaanka ay u qeybiyeen daawooyin.
Saldhiga ciidan ee Al-shabaab lagala wareegay waxa ay maleeshiyaadka Al-shabaab ay u adeegsan jireen goob dadka deegaanka Baladul Amiin ay kaga qaadi jireen lacago baad ah oo ay ku sheegeen Al-shabaab in ay tahay canshuur
MUUQAAL: Daawo Maxaadan Ogeyn Oo Shalay Kismaayo Ka Dhacay????
Muuqaal: Daawo Wasiir Ka Tirsan Jubbaland Oo Doolow Tagay, Isagoona……………………..
War Hadda Ah: Dhageyso Wasiir Hore Oo Galmudug Ah Oo Kamid Noqdey Dadkii Ku Geeriyoodey Qaraxii Galkacyo (Magaciisa Iyo Beesha Uu Ka Soo Jeedo)
admin 31st March 2016 31st March 2016
Musharax Madaxweyne oo Maxkamadi go,aamisey in xabsiga lootaxaabo.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Puntland oo shirar kala duwan la qaatay masuuliyiin katirsan dowlada Finland SAWIRO
admin 23rd October 2015